Ubhala njani uMondli weSikhonkwane
Umncedisi wesikhonkwane Upelo oluchanekileyo
Indawo yokubhala isetiwe ukunceda abantu basebenzise amagama ngokuchanekileyo. Injongo yethu kukukhuthaza ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kwamagama nokumkhulula kwimpembelelo yabo embi. Enkosi kwindawo yethu yokubhala, sifumana isikhokelo ekusebenziseni ngokuchanekileyo kwamagama kwaye enkosi kuye sisusa amanqaku emibuzo ezingqondweni zethu. Ngamanye amagama, sinikezela ngolwazi kubo bonke abantu malunga nendlela yokubhala igama. Unokufumana igama onqikaza ngalo ngokukhangela ibha yokukhangela kwindawo yethu kwaye ufunde upelo oluchanekileyo.
Unokufumana imigaqo echanekileyo yopelo lwamagama kwindawo yethu yendlela yokupela. Ukuba kukho igama ofuna ukulikhangela, funda; Ungayifumana usebenzisa ibhokisi yokukhangela (ngokuchwetheza igama kwibhokisi yokukhangela). Iziphumo ziya kubonisa ukuba elo gama libhalwa njani kulwimi lwethu. Ke ngoko, iwebhusayithi yethu sisikhokelo sopelo oza kuhlala usisebenzisa.Ukuba awukwazi ukufumana igama olifunayo, ungasazisa igama ongalifumaniyo kwicandelo lamagqabaza.
Uthetha ntoni uMxhasi weSikhonkwane?
Ungayibhala njani i-nail feeder?
Isikhonkwane sokondla Isikhokelo sopelo
Falkland Islands phawundi
Ngaphantsi komhlaba (efihliweyo kwaye eyingozi)
Phakathi kwisidlo sakusasa